နံရံကပ်စက္ကူ - စက္ကူစက္ကူ - SURE PAPER
coated ခေါက် box ကိုဘုတ်အဖွဲ့
မြင့်မားသောအမြောက်အများ GC1 ။ GC2
NINGBO ခေါက် C1S Ivory ဘုတ်အဖွဲ့
coated အနုပညာစက္ကူ / ဘုတ်အဖွဲ့
C1S အနုပညာစက္ကူ / ဘုတ်အဖွဲ့
C2S အနုပညာစက္ကူ / ဘုတ်အဖွဲ့
စက္ကူ offset / ကူးယူ
ဇီဝ coated ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်တဲ့စက္ကူ
မြှောင်းပုံစက္ကူ box ကို
EPP cupstock စက္ကူ caoted
kraft စက္ကူ / PE coated
အခမဲ့နမူနာနှင့်အသေးစား ORDER ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်
အခမဲ့နမူနာ (A3 / A4 အရွယ်အစားကဲ့သို့) ကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီးမိနစ်။ အမှာ ၁ တန်ဖြစ်နိုင်သည်
Ningbo သည် C1S ဆင်စွယ်ဘုတ်ကိုခေါက်သည်
EPP costock cupstock စက္ကူ
PLA သည်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးစေသောပ ...
အထူးစက္ကူ Offset Prin ...
ပြန်လည်အသုံးပြု testliner ဘုတ်အဖွဲ့ pa ...
စူပါ C1S ခေါက် Box လေး ...
OEM အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအစားအစာတန်း ...
လိပ္စာ: ROOM 1303-2, NO.158 TAIAN MIDDLE ROAD, SHOUNAN STREET, YINZHOU, NINGBO
အဆိုပါ PE coated စက္ကူကဘာလဲ?
၁။ PE coated စက္ကူဆိုလိုသည်။ PE paper ဟုလည်းခေါ်သည့် coated paper ကိုဖွဲ့စည်းရန်အတွက်စက္ကူ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအပူ - အရည်ပျော် PE ပလပ်စတစ်အဖုံးကို coat လုပ်ပါ။ ၂။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းသာမာန်စာရွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ရေနှင့်ရေနံခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အစားအစာပုံးများ၊ စက္ကူခွက်များ၊ စက္ကူများပြုလုပ်ရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းကြီးမားခြားနားချက် - Bio ဘုတ်အဖွဲ့
အစဉ်အလာ PE ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ၁: အနုပညာပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ၁။ စုဆောင်းခြင်း 2. အစုလိုက် 3.shredding ကို ၄. ဆေးကြောခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ခြင်း ၂။ စိန်ခေါ်မှု ၁။ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်ပလပ်စတစ်အပိုင်းအစငယ်လေးကိုသာပြန်လည်ရယူသည်။ ၂။ ရောစပ်ထားသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးထိရောက်စွာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ...
ဘာကြောင့် PLASTIC ကိုအခမဲ့ရယူရန်လိုအပ်သည်
အလွယ်တကူအသုံးပြုခြင်း၊ လွယ်ကူစွာပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေါ့ပါး။ တည်ငြိမ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုပလတ်စတစ်များအားသမိုင်းတွင်လူတို့ဖန်တီးခဲ့သော“ အအောင်မြင်ဆုံး” ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောအသုံးပြုမှုနှင့်အညီ p ပမာဏ ...
Ningbo ခြံအကြောင်း, သင်သိရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည် ...
ဟေး၊ ပထမတော့ခင်ဗျားဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာနဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုငါအပြည့်အဝနားလည်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကစာရွက်ရဲ့အရင်ဖောက်သည်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကမင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြချင်တယ်။ ငါတို့နဲ့ဘာပဲလုပ်လုပ်ငါတို့ပဲ။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ ။ ၁: "NINGBO FOLD" C1S ဆင်စွယ်ဘုတ်သည် ...
စားနပ်ရိက္ခာတန်း coated ဆင်စွယ်ဘုတ်
အလွန်ပါးလွှာသောတစ်ဖက်သတ်အကန့်အသတ်ရှိသောအစားအစာကဒ် Ultra-lightweight ｜ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု | ပစ္စည်းတန်ဖိုးနိမ့် | အဘယ်သူမျှမ optical တောက်ပအထူ: 1.63-1.74 cm3 / g; အလေးချိန် 200 ~ 350g / m2 အဆိုပြုချက် - ●ပိုမိုပေါ့ပါးသောသိပ်သည်းမှု၊ အလွန်ပေါ့ပါးသော၊